Wax ka baro mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu caansan caalamka - iftineducation.com
iftineducation.com – Magaciisa oo buuxa waa Raccep Tayyip Erdogan. Waxa uu ku dhashay magaalada Istanbul 26-kii February 1954. Waa madaxweynihii 12-aad ee Turkey. Muddadii u dhexeysay 1994 iyo 1998 waxa uu ahaa duqa magaalada Istanbul. 2003 ilaa 2014 waxa uu ahaa ra’iisulwasaarihii 36aad ee Turkiga.
Uganda: Waa Run Askariga ay soo bandhigeen Al Shabaab
Layaab Dowlada sacuudiga oo u badalatay kalandarka masehiga iney isticmaasho, kan islamkana tuurtay